Inkolo kaSara Palin - Inkolelo Yokholo
Uluhlu lokukholwa lukaSarah Palin
USarain Palin wakhuliswa kwi- Assemblies of God inkolo, nangona kunjalo, ukhulumela uMkhankaso kaMcCain-Palin watshela i-Associated press, ngoku uhamba kwiicawa ezahlukeneyo kwaye akazibheki njengePentekoste . Esikolweni esiphakeme, wayekhokelela ekuBambisaneni kwakhe kwendawo yeqela lamaKristu.
Ngokombiko kwi- National Catholic Reporter , namhlanje uPalin uhlala ecaweni lobuKristu elizimeleyo elibizwa ngokuba yiCawa eLwaleni, e-Wasilla, eAlaska.
Kuye kwabikwa ngumlobi wenkolo ye-Associated Press, ukuba ngezinye iinkhathi uPalin uya kwiziko le-Christianau le-Juneau e-Juneau, e-Alaska. Kwale nqaku yexesha , indawo yokunqula i-Palin kuthiwa yi-Wasilla Bible Church.
Iprofayile yezopolitiko kaSara Palin
Iqela: iPublic Republic
Kwiingxaki: i- Palin kwiingxaki ezinkulu
Usuku lokuzalwa: ngoFebruwari 11, 1964
Yunivesithi yaseIdaho, BS
Amava: Omdala uMgcini we-Alaska, uSihlalo wesifazane, i-Alaska ye-Oyili kunye neKhomishoni yokuLondolozwa kweGesi; I-dolophu yee-2, i-Wasilla, i-Alaska; Ibhunga leSixeko se-2, i-Wasilla, i-Alaska.
Ummangalelwa othi: UJohn McCain wamemezela uPalin ukuba abe ngumlingane ngo-Agasti 29, 2008.
I-Snapshot yoLwazi lukaSara Palin
Inkolo / iBandla: engekho kwiCawa , yamaKristu
Iingubo zikaSara Palin Zokholo
Xa ukuvavanywa kwangaphambili kubonisa ukuba umntwana wesihlanu kaPalin uza kuzaliswa nge-Down syndrome, imeko yokuphila yobomi bukaPalin kwaye ngokungathandabuzekiyo ukholo lwakhe lobuKristu, wayemgcina ecinga ukuphela kokukhulelwa.
Xa u-"Trig" omncinci wazalwa, uSara utshele i- Anchorage Daily News , "wayebuhlungu ekuqaleni kodwa ngoku uyaziva ekhokile ukuba uThixo wakhetha." Isitatimende esivela kwintsapho yasePalin ichaza ngokubanzi:
"U-Trig ubuhle kwaye sele esithandwa nguwe." Siyazi ukuba ukuvavanywa kwangaphambili uza kujamelana nemingeni ekhethekileyo, kwaye siziva sinelungelo lokuba uThixo uyasibeka esi sipho kwaye asivumele ukuba uvuyo olungenakwenzeka xa engena ebomini bethu. yenzelwe injongo enhle kwaye inakho ukwenza ukuba le ndawo ibe yindawo engcono. Siyabusiswa ngokwenene. "
UMichael Paulson, umbhali wenkolo kwiBoston Globe uhlanganisana lo mbono obizwa ngokuthi, "USarain onokholo, ubomi kunye nendalo." Ngaloo nto uquka le nxalenye ye- Anchorage Daily News athi:
Bathi, "Ukholo lwakhe lobuKristu luvela kumama, owathatha abantwana bakhe kwiindawo zeBhayibhile njengokuba bekhulayo (uSara ungowesithathu kwabantwana abane.) Bathi ukholo lwakhe luye lwaba lukhuni ukusuka esikolweni esiphakeme, xa ekhokela Ubudlelwane bama-Athletes abangamaKristu, kwaye waqina ngakumbi njengoko efuna amakholwa kwiminyaka yakhe yeekholeji. UPalin akayikukhankanya inkolo yakhe kwinqanaba lomkhankaso, kodwa oko akuthinteli abanye ukuba benze njalo. "
Umhlali waseAlaska ohlala ixesha elide, u-Chas St. George, wathi, "Ukugqoka ukholo lwakhe ngokucace kufana nobuntu bukaPalin."
Okungakumbi Ngokholo lukaSara Palin
I-Political Conservative Politics, iProfayili kaSarain Palin
Ithenda Iimpawu: ezininzi Iimvumi zemiSebenzi yangoku
Amaninzi amaninzi e-French Idiomatic nge-'Avoir '(' ukuba ')
Imizekelo ye-Iambic Pentameter kwiiShakespeare's Plays
AmaNgqina amaNgqina athembekileyo, kodwa angathembekanga
Kutheni iFlamingos Pink?
Ulwazi lweTeknoloji Isigama
Izidlo zeSlime Recipes
Ikholeji yaseLake Forest i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data